ပြည်တွင်း ဆိပ်ကမ်း ကုန်ကျစရိတ် အပါအဝင် ကုန်သွယ်မှု စရိတ် ကြီးမားခြင်း တို့ကြောင့် ပြည်ပဈေး? - Yangon Media Group
ပြည်တွင်း ဆိပ်ကမ်း ကုန်ကျစရိတ် အပါအဝင် ကုန်သွယ်မှု စရိတ် ကြီးမားခြင်း တို့ကြောင့် ပြည်ပဈေး?
နိုင်ငံတကာနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် ပြည်တွင်းဆိပ် ကမ်းကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင် ကုန်သွယ်မှုစရိတ်ကြီးမားခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်ပဈေးကွက်ထိခိုက်မှုဖြစ်နေ ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူးဦးရဲမင်းအောင်က မတ် ၁ဝ ရက်ကပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်ရုံး၌ပြုလုပ်သည့် မြန်မာ့ဆန်စပါးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင်းပမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် ဆန် ဈေးနှုန်းတစ်ခုတည်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်၍မရဘဲ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်၊ ဆိပ်ကမ်းကုန်ကျစရိတ်၊ ဘဏ်စနစ်၊ ပို့ ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မှုစသည့်တို့မှာလည်း အရေး ကြီးကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးရဲမင်းအောင်က”နိုင်ငံတကာမှာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားက ဆန်စပါးတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်မှုစရိတ် စကတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုကိုထိခိုက်နေတယ်။ နိုင်ငံတကာကလက်ရှိအနေအထားမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို နောက်ဆုံးမှစဉ်းစားတယ်။ ပါကစ္စတန်ကဝယ်လို့ရရင် ဒါမှမဟုတ် ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ အိန္ဒိယကဝယ်လို့ရရင် မြန်မာနိုင်ငံကို သိပ်ဦးစားပေးမဝယ်ချင်ကြဘူး။ ဆိပ်ကမ်းစရိတ်စကတွေ၊ ဆိပ်ကမ်းမှာစောင့်ရတာတွေ၊ ဘဏ်စနစ် တွေ ဒါတွေပါလိုက်ပါဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုတယ်။ ဆိပ်ကမ်းတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိပ်ကမ်း စရိတ်စကတွေ လျော့နည်းဖို့ သယ်ယူပို့ဆောင်တဲ့စရိတ်စကတွေ လျော့နည်းဖို့လိုတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုဆိုတာ စပါးဈေး၊ ဆန်ဈေးထက်ကိုတခြားသယ်ယူပို့ဆောင်တဲ့ စရိတ်စကတွေ ဘဏ်စနစ်တွေ၊ အိတ်စ်ပို့ စတာတွေအတွက်ကိုသက်သာတဲ့အတိုးနှုန်းနဲ့ ချေးငွေပေးနိုင်မှုအ ပိုင်းတွေ၊ ကုန်သွယ်မှုချေးငွေ ဒါတွေလည်းအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာကအသေးစားနဲ့အလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေက သိုလှောင်ရုံငှားရမ်းလုပ်ဖို့ဆိုတာ သိုလှောင်ရုံစရိတ်စကတွေက ကျပ် သိန်းရာချီ ကျပ်သိန်းထောင်ချီဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။ ဒါ တွေကိုဘက်စုံစဉ်းစားလုပ်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်”ဟု ပြောသည်။
ယင်းအပြင် နိုင်ငံအများအပြားတွင် အရည်အသွေးမြင့်သော အစားအသောက်များကို ဦးစားပေးဝယ်ယူလာခြင်းကြောင့် အရည်အသွေးမြင့်တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များကို ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၂၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်တန်းမြင့်ဆန်များကို ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဦးရဲမင်းအောင်က”ရေရှည်အတွက် ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်း ၂ဝ၂၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ အရည်အသွေးဦးစားပေးတဲ့ ဆန်တွေကို တိုးချဲ့ပြီးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချဖို့ ပိုစဉ်းစားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်လောက်အတွင်းမှာ အရည်အသွေးဆိုတာ ဒီလောက်အထိ ပြောလို့မရသေးဘူး။ ကိုယ့်မှာအခြေခံအဆောက်အအုံကောင်းကောင်း မရှိသေးဘူး။ တကယ် high Quality value added ဒါတွေဦးစားပေး လုပ်ဖို့ရှိပေမယ့် နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ် ရေတိုမှာ တန်းလတ်ဆန်တွေက မေ့ပစ်လို့မရသေးဘူး။ ဆန်စက်တွေရဲ့ အခြေအနေအရ ဒီနှစ်လိုမျိုး ထူး ခြားတာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို တန်းမြင့်ဆန်တန်ချိန်တစ်သိန်းရောင်းချ လိုက်နိုင်တယ်။ ဒါက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာ ဒီဘက်ကာလပြန်ကြည့်ရင် တန်ချိန်တစ်သိန်းကို စာချုပ်ချုပ်ပြီး တင်ပို့ရောင်းချနိုင်တာ တော် တော်ထူးခြားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီလို တန်းမြင့်ဆန် တွေကို တင်ပို့နိုင်အောင်လုပ်ရမှာ”ဟု ပြောသည်။
လတ်တလော စိစစ်မှုအရ ပြန်လွှဲမည့် ဘင်္ဂါလီ ၈ဝဝဝ ကျော် စာရင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ နေထိုင်ဖူးသူ ၃ဝဝ ??
ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ အားနည်းနေသောကြောင့် သက်ငယ်မုဒိမ်း အမှုများ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတ
တရားမဝင် မြန်မာအလုပ်သမားများအား ပြန်လည်လက်ခံကြိုဆိုခဲ့သည့် မြဝတီပြန်လည် ကြိုဆိုရေးစခန်း?
တရားမဝင် ဓာတ်ဆီဆိုင်များကို ပြင်းထန် ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ရေး တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ??
ပြည်သူနှင့်အတူ ဆိုသည့်စကား လုပ်ရပ်ဖြင့် သက်သေပြနေဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပြောခွင့်ရဆို
ဗီဒီယိုဖုန်း ခေါ်ပြောဆိုသည့် နည်းပညာကြောင့် အသက်ရှင်ခဲ့